प्यारालाइसिसले सताएका रामबहादुर राईको र्‍याप : जिन्दगीले यसरी धोका दियो... (भिडियो)
2020-07-20 17:31:42 | ५ साउन २०७७
रामबहादुर राईको घर इलाममा पर्छ। फिक्कलदेखि पारी नयाँ बजार भन्ने ठाउँमा। ५६ वर्षीय उनी अहिले भक्तपुरमा भेटिन्छन्। मानव सेवा आश्रममा। त्यहाँ ५५ जना आफूजस्तै बाटोबाट उद्धार भएर आएका साथीहरू छन् उनका। ती साथीहरू कोही शारीरिक रुपमा फरक छन्, कोही मानसिक रुपमा। रामबहादुर स्वयंलाई पनि प्यारालाइसिस भएको छ। उनलाई उच्च रक्तचाप पनि छ। रामबहादुरको ठूलो सपना थियो – गायक बन्ने। बाल्यकालमा रेडियो सुन्दा…
सडकमा गुड्न थाले तीन पांग्रे टेम्पो, तर ब्रेक लाग्यो धेरै सपनाहरूमा
2020-07-17 07:22:47 | २ साउन २०७७
'दिदी स्यानिटाइजर राख्नु भएको छ?' कसैले झ्यालैमा आएर सोध्दा सुरुमा त झस्किइन् पार्वती सिनल। किनकि त्यसरी आउनेले 'दिदी यो टेम्पु कहाँ जान्छ?' भनेको सुन्ने बानी थियो उनलाई। स्यानिटाइजर शब्द कोरोना भाइरसको चर्चासँगै चल्नचल्तीमा आयो। नेपालमा पनि कोरोनाको खबरहरु सुनिन हुन थालेपछि मात्रै उनले स्यानिटाइजरबारे थाहा पाइन्। भाइरस रोकथामको लागि धेरै आवश्यक छ भने बुझेकी थिइन्। त्यसैले लकडाउनपछि करिब ४ महिना…
2020-07-10 07:06:25 | २६ असार २०७७
लमजुङ्की सानु गुरुङको सपना थियो- एयर होस्टेस बन्ने। प्लस टु सकिए लगत्तै दाजुले एभिएसन तालिमका लागि पठाए। काम थाले पनि पढाईलाई निरन्तरता दिनु पर्ने शर्तसहित। सानु राजी भइन्। तालिम लगत्तै अवसरहरुको खोजी थालिन्। आफूजस्तै एयरहोस्टेस बन्ने साझा सपना देखेकाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिन्। छनौटमा पर्न सजिलो रहेनछ भन्ने थाहा भएपछि थप मेहनत गरिरहिन्। केही महिनामा उनको सपनाले उडान भर्‍यो। काम पाइन्, बुद्ध एयरमा। खुशीको…
2020-06-27 07:00:01 | १३ असार २०७७
'भाइको अभिनय दामी रै'छ। सिरियल खेल्ने भए दश हजार खर्च गर।' चार वर्षअघिको कुरा हो। त्यतिखेर हिमेश पन्तसँग टेलिश्रृङ्खलामा अभिनय गर्नकै लागि दश हजार रुपैयाँ थिएन। तर, हाँस्य अभिनयको हुटहुटी भने निकै थियो। ठाउँ पाए आफ्नो ट्यालेन्ट देखाएरै हिट हुन्छु भन्ने लाग्थ्यो उनलाई। त्यसैले 'दिमाग खराब' नामक टेलिश्रृङ्खलामा अभिनयका लागि बार्गेनिङ गरे। पाँच हजार तिरे। 'क्र्याक' नामक पात्र दिइयो उनलाई।…
११ महिने अंकुशको निमोनियासँगै कोरोनासँगको संघर्ष : जितेरै छाडे दिल्लीदेखि अम्बरपुरसम्मको कठिनाइ
2020-06-17 07:15:26 | ३ असार २०७७
काठमाडौं : पाँच महिना अघि अंकुशको निमोनिया बल्झियो। छोराको स्वास्थ्य उपचारका लागि श्रीमतीलाई भारत बोलाए वीर सुनारले। उनकी श्रीमती सोना ११ महिने छोरा च्यापेर दिल्लीको खान मार्केट पुगिन्। त्यहीँको होटलमा वीर कार्यरत। मासिक आम्दानी २२ हजार। खान, बस्नको खर्च बेग्लै। ठीकठाक रकम जोगिन्थ्यो। केही रकम जोगाएका थिए। त्यसैले त श्रीमतीलाई उतै डाक्न आँट गरे त्यो पनि छोराको उपचारका लागि। २१…
एउटा प्रेरक कथा : ‘जिरो केस’ बाट भाइरसको 'हट स्पट' हुँदासम्मको अनुभूति
2020-06-14 10:41:22 | ३२ जेठ २०७७
वैशाख अन्तिमसम्म पनि कर्णाली प्रदेशका कसैमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको थिएन। बनाइएका क्वारेन्टाइनहरु रित्ता थिए। कोरोना संक्रमितकै लागि भनेर बनाइएका आइसोलेसन वार्डहरु शून्य। तर, कर्णाली कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा भने थियो। छिमेकी प्रदेशहरुमा कोरोना संक्रमित बढ्दै थियो। सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरु देश भित्रन थालेका थिए। कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले पनि भारतबाट आएका हजारौं नागरिकको उद्धार थालिसकेको थियो। मानिस…
सामाजिक दुरीको नाममा असामाजिक व्यवहार : जसले आफ्नै विरामी छोरालाई घर छिराउन पाइनन्
2020-06-13 06:18:53 | ३१ जेठ २०७७
काठमाडौं : 'कसरी आयौ जेठा एक्लै?' अप्रत्यासित हिसाबले आइपुगेका ज्ञानेन्द्रलाई देखेपछि आमा नानीमायाले सोधिन्। मास्क लगाएका उनी ढोकामा चुपचाप उभिइरहे। सुरुमा त विश्वास गर्न गाह्रो भयो नानीमायालाई। कारण हो, लकडाउन। गाडी चलेको छैन। सँगै ज्ञानेन्द्रका भाइहरु पनि थिएनन्। आमाको प्रश्नको जवाफमा बस् फिस्स हाँसेमात्र ज्ञानेन्द्र। त्यसपछि उनले माइला छोरा भुवनलाई फोन लगाइन्। 'कतिखेर निस्किनु भयो थाहै पाएनौं। हामी काममा थियौं,'…
आफैँलाई चिन्दिनन् उनी, न ठाउँ थाहा छ न परिवार नै : कोरोनामुक्त हुँदाको खुशी साटुन् कोसँग?
2020-06-11 10:10:30 | २९ जेठ २०७७
जेठ २३ गते। रातको ९ बजेको थियो। साँझदेखि परेको झरी रोकिने छाँट थिएन। सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर चोकमा एक महिला निदाइरहेकी थिइन्। लकडाउनले ठप्प बजारमा भेटिएकी उनलाई त्यहाँ देखेपछि प्रहरीले प्रश्न गरे, ‘कहाँ हिँड्नु भयो?’ तर, उनी बोलिनन्। निकै बेरसम्म नाम, ठेगाना सोध्दा पनि चुप। आत्तिएकी जस्तो देखिएकी उनले केहीबेरमा आवाज त निकालिन् तर बोली निकै अस्पष्ट। बुझ्नै नसकिने। गुलावी र कालो रङ मिसिएको कुर्ता,…
चारवटा गाईसँग गोठमै जल्यो भूकम्पले थोपरेको ऋणबाट उकासिने योजना
2020-05-27 13:15:36 | १४ जेठ २०७७
लकडाउन लम्बिनेमात्र होइन, थप कडा हुँदैछ भन्ने खबरसँगै खड्गबहादुर ढकालले हतारहतार पराल किने, दाना र पिठोको जोहो पनि गरे। ऋण गरेरै करिव डेढ लाखको दानापानी थपेपछि ढुक्क भए। किनकि पाँचवटा गाईलाई केही महिनासम्म पुग्दो आहार जम्मा भएको थियो। वरपर घाँस हुर्किएका छन्। खड्गबहादुरकी श्रीमती पनि ढुक्क थिइन् – अब लकडाउन थपिए पनि गाई भोको रहँदैनन्। गएको जेठ ७ गते खड्गबहादुर…
प्रहरीलाई नै बद्‍नाम गराउने त्यो इन्स्टाग्राम पोस्ट जसमा प्रहरीकै नजरअन्दाज
2020-05-21 07:41:05 | ८ जेठ २०७७
"वैशाख ३० गते। जोरपाटी आरुबारीको चामुण्डा गेट जाने बाटोमा दुई आम नागरिक आफ्नो घर बाहिर निस्किए। सायद् केही व्यक्तिगत काम थियो। बाहिर निस्किएकै कारण उनीहरु कुटिए। त्यो पनि नेपाल प्रहरीका दुई कर्मचारीबाट।" अध्याँरोमा खिचिएकाले भिडियो प्रष्ट छैन। तर, त्यसमा सुनिएको आवाजले धेरैको ध्यान खिच्यो। एक बालकसहित पुरुष चिच्याइरहेका सुनिए। रोइकराइ गर्दै 'ऐय्या आत्था' गरिरहेका छन् ती पुरुष। भिडियोमा सुनिएको आवाजमा…
के सुत्केरी महिला कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन् ?
2020-05-16 22:47:26 | ३ जेठ २०७७
काठमाडौं : विहीवार धुलिखेल अस्पतालमा एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भयो। सन्तान जन्माएको ९ दिन पछि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिए पछि उनलाई त्यहाँ पुर्‍याइएको थियो। अस्पताल पुगेको छोटो समयमा नै उनको मृत्यु भयो। शनिवार तिनै महिलाको स्वाब परीक्षणको नतिजा आयो। जसले मृतक महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको पुष्टि गर्‍यो। समाचार सार्वजनिक भए – 'धुलिखेल अस्‍पतालमा कोरोना संक्रमित महिलाको निधन।' सामाजिक सञ्जाल एवं…
निःशुल्क डायलासिसमा बिरामीबाट असुल्न थालियो शुल्क
2020-05-13 06:59:56 | ३१ बैशाख २०७७
काठमाडौं : गोंगबुस्थित बुलन्द सिद्धि अस्पतालले गत वैशाख २२ गतेदेखि किड्नी डायलासिसका बिरामीसँग शुल्क लिन थाल्यो। बिरामीले साताकै ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। अस्पतालको राष्ट्रिय डायलासिस केन्द्र यसअघि बिरामीका लागि नि:शुल्क थियो। किनकि अस्पताललाई भुक्तानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन्थ्यो - एकजना बिरामीको एकपटकको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ। अस्पतालमा ७९ जना बिरामीले नि:शुल्क सेवा लिँदै आएका थिए। तर, लकडाउन सुरु भएको डेढ…
अस्पतालको 'रेड जोन'मा कुचो र कोलिन लिएर पुग्नेको कथा
2020-05-11 10:48:26 | २९ बैशाख २०७७
हरेक दिन कलंकीदेखि टेकु हिँडेरै ओहोरदोहोर गर्छिन् सीता कुँवर। उनी हिँड्ने बाटोमै मन्दिरहरु पर्छन्। ती मन्दिरका सामुन्ने पुग्नासाथ उनी टक्क उभिन्छिन्। दुई हात जोडेर आँखा चिम्म गर्छिन्। र, पुकार्छिन् – 'कोरोना भाइरस यतिमै साम्य होस्। सबैलाई चाँडै ठीक होस्। सबै सुरक्षित रहुन्।' टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पताल काम गर्छिन् सीता। जब उनी अस्पतालको मुल गेटमा पुग्छिन् औषधीका राग मुखैमा ठोक्किन आउँछन्।…
तिनीहरुको कथा जो हरेक दिन अस्पतालको 'रेड जोन'मा खटिरहेछन्, कुचो र कोलिन बोकेर
2020-05-11 10:12:58 | २९ बैशाख २०७७
सुनील भन्छन् इरफान तेरो आत्माले शान्ति पाओस्
2020-05-08 23:50:00 | २६ बैशाख २०७७
फेसबुक म्यासेन्जरमा सुतापाले अप्रत्यासित रुपमा एउटा आग्रह गरिन् - 'पशुपतिनाथमा एउटा पूजा लगाइदिनुस् न स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै।' अनौठो लाग्यो सुनील पोखरेललाई। किनभने उनी कहिल्यै धर्मको विश्वास गर्दैन थिए। न त कुनै धर्ममाथि प्रश्न नै गर्थे। सुतापा सिक्दरले निशा शर्मालाई पूजा लगाउन गरेको आग्रह पूरा भयो। 'सुतापाले भनेझै हामीले पशुपतिनाथमा पूजा गर्‍यौं। उसको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि,' सुनीलले भने। कलाकारद्वय…
'त्यसको आत्माले शान्ति पाओस्'
2020-05-08 06:58:41 | २६ बैशाख २०७७
'नेप्लिज बेब्स'मार्फत् यौन अपराध, के भारतमा झै प्रहरीले सक्ला अपराधी समात्न?
2020-05-07 15:22:41 | २५ बैशाख २०७७
भर्चुअल समूह 'नेप्लिज बेब्स'मा जथाभावी पोस्ट र कमेन्ट हुने गरेको गायिका त्रिशला गुरुङलाई थाहा थियो। तर एकदिन उनकै इनबक्समा उक्त समूहको एउटा लिङ्क आयो। त्यसले उनमा चासो जाग्यो - के रहेछ त भन्ने। उनले त्यसमा लगइन गरिन्। नभन्दै त्यहाँ अभद्र टीका टिप्पणीको ओइरो देखिन्थ्यो। सँगै फोटोहरु पनि अपलोड भइरहेका थिए। ती फोटोमा गरिएका कमेन्टले उनलाई झसङ्ग पार्‍यो। फोटो उनकै थियो…
यी ‘अनागरिक’ को भोको पेट, उधारो जिन्दगी : हैदरावादको हालले नेपालमा छटपटी
2020-05-02 09:45:10 | २० बैशाख २०७७
एक महिना भयो शारदा गिरीको भान्सामा तरकारी नपाकेको। त्यसयता उनी र उनका छोरा, बुहारीको नियमित मेनु हो : थर्मसको बिर्को भरी हुने चामलको भात। भात सजिलै निल्न घरबाट ल्याएको इम्ली र नुनको झोल। बट्टामा गोलभेडाको अचार पनि छ। त्यो पनि निख्रिनै लागिसक्यो त्यसैले खान्छन् कम सुँघ्छन् ज्यादा। इम्ली पनि सकिएपछि चाहिँ भात निस्तै खानुपर्छ। चामल पनि बढीमा चार माना बाँकी…
अमिताभ बच्चन र ऋषि कपूरको कोल्ड वारबीच सहकार्य : सम्बन्ध सुध्रिँदै गर्दा एकजना भए जीवनबाटै 'अलआउट'
2020-04-30 14:09:53 | १८ बैशाख २०७७
'उ गयो। ऋषि कपूर भर्खरै गयो। म टुक्रिएको छु।' बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको यही ट्वीट अर्का भेट्रान बलिउड अभिनेता ऋषि कपूरको निधनको आधिकारिक जानकारी बन्यो। यो आलेख तयार भइरहँदा अमितावले त्यो ट्विट भने डिलिट गरिसकेका छन्। उमेरमा यी दुई कलाकारबीच १० वर्षको अन्तर छ। तर, हिन्दी फिल्म इन्डस्ट्रीमा भने अमिताभ भन्दा एक वर्षमात्र ढिला प्रवेश गरे ऋषिले। तर, रोचक त…
भुटानी अभिनेत्री उगेनको कामना : छिट्टै सकियोस् संक्रमण, सुरु होस् काम र जान पाइयोस् नेपाल
2020-04-29 07:18:58 | १७ बैशाख २०७७
भुटानी अभिनेत्री उगेन छोदेन बेग्लै उर्जा बोकेर नेपाल आएकी थिइन्। धेरै उत्साह थियो किनकि उनी अभिनित पहिलो नेपाली फिल्मको छायाँङ्कन सुरु हुँदै थियो। थोरै डर चाहिँ थियो किनकि नयाँ ठाउँमा नयाँ टिमसँगको सहकार्य कस्तो पो होला? उत्साह र अन्यौलता बीच दुई कुराले आत्मविश्वासी बनायो छोदेनलाई। पहिलो अभिनयप्रतिको रुची र दोस्रो नेपाली भाषा। राष्ट्रिय भाषा जोङ्खा भए पनि भुटानमा प्राय मानिसले…